कति खराब साइटहरूले उनीहरूको विजिटरहरूको संख्या बढ्ता गर्छ? | Martech Zone
कति खराब साइटहरूले उनीहरूको विजिटरहरूको संख्या बढ्ता गर्छ?
बिहीबार, जुन 7, 2007 शनिबार, जनवरी 6, 2018 Douglas Karr
ComScore भर्खरै यसको जारी गरियो कुकी मेटाउने मा श्वेत पत्र। कुकीहरू सानो फाइलहरू हुन् जुन वेब पृष्ठहरूले मार्केटिंग, विश्लेषण, विश्लेषण, र प्रयोगकर्ता अनुभवको साथ सहयोग गर्न। उदाहरण को लागी, जब तपाइँ एक बक्स जाँच एक साइट मा तपाइँको लगइन जानकारी बचत गर्न को लागी, यो सामान्यतया एक कुकी मा बचत गरीन्छ र अर्को पटक तपाईले त्यो पृष्ठ खोल्दा पहुँच गर्नुहोस्।
एक अद्वितीय आगन्तुक के हो?
विश्लेषणात्मक उद्देश्यका लागि, प्रत्येक पटक वेब पृष्ठले कुकी सेट गर्दछ, यो नयाँ आगन्तुकको रूपमा चिनो लगाइएको छ। जब तपाईं फर्कनुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईं पहिले नै त्यहाँ भएको देख्दछन्। यस दृष्टिकोणको साथ त्यहाँ केही भिन्न त्रुटिहरू छन्:
प्रयोगकर्ताहरूले कुकीहरू मेटाउँछ ... तपाईले सोचे भन्दा बढि।
उही प्रयोगकर्ताले बहुविध कम्प्युटर वा ब्राउजरहरूबाट वेब साइट पहुँच गर्दछ।
क्षेत्रीय समाचार साइटहरूले यस प्रकारको जानकारीको आधारमा विज्ञापनदातालाई चार्ज गर्न सक्षम छन्। वास्तवमा, स्थानीय इन्डियानापोलिस अखबार बताउँछ,
IndyStar.com समाचार र जानकारीको लागि केन्द्रीय इण्डियाना नम्बर १ अनलाइन स्रोत हो, million करोड भन्दा बढी पृष्ठ हेराईहरू प्राप्त गर्दै, २.2.4 मिलियन अद्वितीय आगन्तुकहरू र एक महिना 4.7..XNUMX मिलियन भ्रमण गर्दछ।
त्यसो भए कसरी कुकी मेटाउने स्क्यू नम्बरहरू गर्न सक्छन्?
अध्ययनका नतीजाहरुले देखाए कि अमेरिकी कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरुका करीव their१ प्रतिशतले एक महीनामा उनीहरूको पहिलो पक्षीय कुकिज खाली गर्छन् (वा तिनीहरुलाई स्वचालित सफ्टवेयरले सफा गरेको छ), औसत 31.. different भन्दा बढी कुकीज यस उपयोगकर्ता क्षेत्र भित्र समान साइटका लागि अवलोकन गरिएको छ। । २०० independent मा बेल्टेन एसोसिएट्स द्वारा २०० Prior मा जुपिटररेसार्च र २०० 4.7 मा निल्सेन / नेटरेटि by्ग्स द्वारा गरिएको स्वतन्त्र अध्ययनले पनि निष्कर्ष निकालेको छ कि कुकि cookiesहरु एक महिनामा कम्तिमा Internet० प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु द्वारा हटाइन्छ।
आधारको रूपमा comScore अमेरिकी घर नमूना प्रयोग गरेर, याहूको लागि प्रति कम्प्युटर प्रति औसत २.ct भिन्न कुकीहरू अवलोकन गरिएको थियो! यो खोजले संकेत गर्दछ कि कुकी मेटाउने कारणले, एक सर्भर-केन्द्रित मापन प्रणाली जसले साइटको आगन्तुक आधारको आकार मापन गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ सामान्यतया २.xx सम्मको कारकले अद्वितीय आगन्तुकहरूको स true्ख्यालाई ओभरसेट गर्दछ, जुन भन्नु पर्ने हो १ 2.5० प्रतिशत सम्मको ओभरस्टेमेन्ट। त्यस्तै, अध्ययनले पत्ता लगायो कि एक विज्ञापन सर्भर प्रणाली जसले एक अनलाइन विज्ञापन अभियानको पहुँच र फ्रिक्वेन्सी ट्र्याक गर्न कुकिजहरू प्रयोग गर्दछ २. ax सम्मको कारकले समान ओभर डिग्रीमा फ्रन्टभेन्ट फ्रन्टस्टेन्ट र पहुँचलाई बढ्तै पार्नेछ। बढि मञ्चको वास्तविक परिमाण साइटमा भ्रमणको बारम्बारता वा अभियानमा जोखिममा निर्भर गर्दछ।
के विज्ञापनदाताहरूको फाइदा लिइदैछ?
हुनसक्छ! स्थानीय समाचार साइट जस्ता साइट लिनुहोस् र त्यो २.2.4 मिलियन संख्या तुरून्त एक मिलियन आगन्तुकहरूमा खस्नेछ। समाचार साइट एक साइट हो जुन बारम्बार भ्रमण गरिएको हुन्छ, त्यसैले त्यो संख्या त्यो भन्दा राम्रो हुन सक्दछ। अब पाठकहरूको संख्या थप्नुहोस् जुन घर र कार्यस्थलमा साइट भ्रमण गर्दछ र तपाईं त्यो संख्यालाई अर्को महत्त्वपूर्ण रकम छोडिरहनुहुन्छ।
यो पुरानो 'eyeballs' भीडको लागि समस्या हो। जबकि बिक्री मान्छे जहिले पनि संख्याहरू द्वारा बेचिन्छन्, उनीहरूको वेबसाइटहरूमा प्रतिस्पर्धी मिडियाको तुलनामा धेरै कम आगन्तुक हुन सक्छन्। अवश्य पनि, मुद्दालाई 'समाधान' गर्ने कुनै वास्तविक तरिका छैन। जे होस् आधा मस्तिष्कको साथ कुनै पनि वेब पेशेवरले यो कुरा हो भनेर स्वीकार्दछ, म यो भन्न खोजिरहेको छैन कि साइटहरूले जानाजानी तिनीहरूको संख्यालाई बढ्तै महत्त्व दिइरहेका छन्। तिनीहरू उद्देश्यको लागि तिनीहरूको तथ्या .्कलाई बढवा दिइरहेका छैनन् ... तिनीहरू केवल उद्योग मानक तथ्या .्कहरू रिपोर्ट गरिरहेका छन्। तथ्या that्कहरू धेरै हुन्छन्, धेरै अविश्वसनीय हुन्छन्।
कुनै पनि राम्रो मार्केटिंग कार्यक्रमको रूपमा, परिणामहरूमा फोकस गर्नुहोस् र नेत्रगोलको संख्यामा होइन! यदि तिमी हो मिडिया प्रकारहरू बीच दरहरू तुलना गर्दा, तपाईं केहि द्रुत गणित लागू गर्न चाहानु सक्नुहुन्छ त्यसैले संख्याहरू अलि बढी यथार्थपरक छन्!
टैग: विज्ञापन संख्याविज्ञापनविज्ञापन गणनाcomscoreकुकी मेटाउनेआगन्तुकहरूको संख्या
WordPress मा श्रेणिहरु तान्ने MySQL क्वेरी
गुगल ऐडवर्ड्स, एड्सेन्स र गुगल नक्शा?
सायद भविष्यमा कार्डस्पेसको लाइनमा केहि ले यस समस्यालाई रोक्दछन्। यद्यपि यो धेरै ठूलो भाई बन्न सक्छ। हामीले भर्खर हेर्नु पर्छ र हेर्नुहोस्।
तपाईंले भन्नुभएको हो, कुनै वेबसाइटमा अद्वितीय आगन्तुकहरू निर्धारण गर्ने कुनै सही तरीका छैन।
कूकीहरू विश्वसनीय छैनन् र अब धेरै व्यक्तिले ग्राहक साइड भण्डारणको लागि फ्ल्यास प्रयोग गरिरहेका छन्।
तर विज्ञापनदाताहरूका लागि, पृष्ठ दृश्य सबै कुराको महत्व हो। यो सजिलो रूपमा विज्ञापन प्रदर्शित समय को संख्या निर्धारित गर्न को लागी सजिलो छ
र त्यस पछि धेरै वेब तथ्या .्क सेवाहरूको आफ्नै समस्या छ। प्रत्यक्ष तथ्या .्क साइटहरू जस्तै स्ट्याकउन्टरले एक पटकमा प्रयोगकर्ताहरूको सीमित संख्यालाई ध्यानमा राख्नेछ।
गुगल एनालिटिक्स यसमा धेरै राम्रो छ, तर कहिलेकाँही मैले भर्खरको रिपोर्ट प्राप्त गर्न २ दिन पर्खनु पर्दछ 🙁
यो बढि ठूलो छैन
जुन 9, 2007 मा 4: 00 PM
"याहूको लागि प्रति कम्प्युटर औसत २.२ भिन्न कुकीहरू अवलोकन गरिएको थियो!"
घर घरको कम्प्युटरमा कति याहू प्रयोगकर्ताहरू छन्? हो, सायद २ वा around जतिसुकै। मलाई थाहा छ म आफ्नी श्रीमतीलाई लगातार लगअग गर्दैछु ताकि म मेरो खाता जाँच गर्न सक्दछु, यो याहू वा गुगल, श्वाब वा कुनै अन्य साइटमा होस्।
हाम्रो घरमा हामीसँग २ वयस्कहरूको बीचमा PC पीसी र म्याक अनलाइन हुन्छ, त्यसैले यस्तो हुन्छ कि तपाईंसँग एउटा कम्प्युटर छ वा धेरै।
यदि तपाईंसँग एक Reg साइट छ र तपाईंको सर्भर लग उपयोगी छ, प्रत्येक आईपी ठेगानाहरूको लागि नामको रिपोर्ट बनाउनुहोस्। (यसले देखाउँदछ कि कति जनाले कम्प्युटरहरू साझा गर्छन् / डुप खाताहरू छन्)। त्यसोभए एक रिपोर्ट बनाउनुहोस् कि प्रत्येक नाम कती आईपीमा देखा पर्दछ। (यसले देखाउँदछ कि a) आईप्सहरू इएसएस द्वारा पुन: प्रयोग गरिन्छ र बी) प्रयोगकर्ताहरू मल्टिपिपल स्थानहरूबाट लग इन गर्छन्। )
त्यसैले हो, २. number नम्बर सहि छ। ठगी छैन, बढि बढाइएको छैन, ठीक सहि। यहाँ कुनै कथा छैन। अब सँगै सार्नुहोस्।
जुन 9, 2007 मा 4: 25 PM
लेख लेखिएको छ कि कुकीजको सम्बन्धमा लगईन / लगआउट मुद्दाहरूको छलफल गरिरहेको छैन, यो कुकीको कुरा गरिरहेको छ मेटाउने र यसको प्रभाव अनौंठो पृष्ठ दृश्यहरूमा। याहू! तपाइँ लगआउट र लगइन गर्दा कुकीहरू मेटाउदैन।
मुद्दामा यो हो कि 30०% भन्दा बढी घरपरिवारले उनीहरूको कुकीहरू मेटाउँदछन्, त्यसैले तपाईं नयाँ आगन्तुकको रूपमा देख्नुहुनेछ ... घरपरिवारमा अर्को होइन। कृपया अधिक गहन विवरणका लागि लेख पढ्नुहोस्।
तपाईंको उदाहरण मैले मेरो पोष्टमा भनेको कुरा पनि हो, जुन धेरै व्यक्तिले एउटै साइटलाई धेरै मेसिनहरूको भ्रमण गर्छन्। Adults पीसी र २ वयस्क बीचको म्याकको साथ, यदि तपाईं सबै मेशिनहरूमा उही साइटको भ्रमण गर्नुभयो भने, तपाईंलाई २ 'अद्वितीय आगन्तुकहरू' को रूपमा देख्न सकिन्छ, २.! होइन! र यदि तपाईं नियमित रूपमा कुकीहरू मेटाउँदै हुनुहुन्छ आबादीको %०% + को रूपमा, जुन १२..4 भन्दा बढि अद्वितीय आगन्तुकहरूमा जान्छ।
मैले भने जस्तै, मलाई विश्वास छैन यो जालसाजी छ ... तर यो बढ्तै सोचविचारित छ। तपाईंको घरले यो प्रमाणित गर्दछ।
जुन 9, 2007 मा 11: 22 PM
लेख र तपाइँको प्रतिक्रिया फेरी पठन ...तिमी सही छौ। मैले मूल रूपमा तपाईंको कुराको गलत अर्थ लगाएँ। स्पष्ट पार्नुभएकोमा धन्यवाद।
भनिएको छ, गौतम ठीक छ – अधिक मान्छेले फ्ल्यास कुकिज प्रयोग गरिरहेका छन्, जब उनीहरूसँग फ्ल्यास सेवाको कुनै अन्य कारण छैन। डरलाग्दो सानो रहस्य: तपाईं आफ्नो फ्ल्यासमा सेट गरिएको कुकीहरू मेटाउन सक्नुहुन्न (सजीलै)।
(गुगलले धेरै फ्ल्यास सेवा प्रदान गर्दैन। डबलक्लिकले…)
यदि साइटहरू विज्ञापनदाताहरुमा स्वच्छ आउन चाहान्छन्, तिनीहरूलाई अधिक पारदर्शिता चाहिन्छ कुन वस्तु कहिले र कसले हेर्यो भनेर।
किनकि लग फाइलहरू त्यसमा राम्रो छैनन्, तिनीहरूलाई डाटाबेसमा धेरै डाटा चाहिन्छ। धेरै धेरै डाटाबेस।
किनकि यो छिट्टै हुनेवाला छैन, उत्तम विचार, तपाईले भन्नु भए जस्तै परिणाममा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो!